Indlela yokufumana i-backlink esemgangathweni kwiwebhusayithi yakho kunye namacebo asebenzayo?
Bonke abanikazi bewebhsayithi abangathanda ukuphucula amazinga abo bafuna iindlela zokufumana i-backlink kwiiwebhusayithi zabo. Izixhumanisi ezingenayo ziyimpawu ezibalulekileyo kwiwebhusayithi yakho usezingeni kunye nevoti zegunya lakho. Ukwakha isiqhagamshelo yinkqubo yokudala iikhonkco ezintsha ezithintekayo kwezinye iiwebhusayithi ezinxulumene nenjongo ngenjongo yokuphakamisa igunya lomnxeba nokutsala ezinye izitrato kumthombo odibeneyo.Inkqubo yokwakha isixhumanisi ibhekiselele ekuphuculweni kwekhasi elikude kwaye kufuneka lenziwe emva kwesakhiwo sewebhu kunye nokuphucula ukusetyenziswa, umgangatho wokuqulunqwa komxholo, kunye nokudala ukuklama komsebenzisi. Xa zonke iinkqubo zenkqubo yokulungiswa kwekhasi zenziwe, lixesha lokubonisa indawo yakho kubaphulaphuli ababanzi. Isakhiwo soqhagamshelwano sifana nelizwi lomlomo, elihambelanayo neqhinga lokuthengisa elingezantsi.
Ukudala zonke i-backlink akunakwenzeka. Ngokunjalo, yikho ke kufuneka ufunde ezinye izinto eziphezulu ezilandelayo ezilandelayo:
Izixhumanisi ezingenayo ziyanamandla xa zivela kwimithombo yewebhu enxulumene neshishino.
Umbhalo wakho we-anchor kufuneka ukhangele ngokwemvelo kwaye udibene nesihloko somxholo kunye negama lakho elingundoqo.
Isicatshulwa esiphathelene ne-backlink yakho kufuneka sibe yinto efanelekileyo nefanelekileyo. Abasebenzisi akufanele bakhange njengentengiso.
Inani leenxibelelwano ezingenayo kwikhasi elixhomekeke kwakho.
Igunya lephepha lokudibanisa kunye nedumela.
I-website ye-link yeWorldRank.
Ngaphezu koko, kufuneka ugcine engqondweni le miba elandelayo ngelixa udibanisa isayithi lakho:
I-backlinks yakho kufuneka yakhiwe kwiindawo ezininzi ukubonisa iGoogle ukuba umxholo wakho uxabiswa nenani labantu abahlukileyo. Ngaphezu koko, ngokudala izixhumanisi kwimimandla eyahlukeneyo, uphucula iphrofayili yakho yekhonkco kwaye wenze kubekho ngaphezulu.
Ukulinganisela phakathi kokulandelwayo kunye neenfayili ezilandelayo
Ngokuqinisekileyo, injongo yokuqhagamshela isiqhelo kubaninzi be-webmasters kukufumana i-backlinks ngenxa yokudlulisa qhagamshela ijusi kwimithombo edibeneyo. Nangona kunjalo, ukudala iphrofayli ebonakalayo enempilo kunye nengokwemvelo, kufuneka uvelise zombini ulandelelwano kwaye ungalandeli i-link zangaphandle.
Udinga ukudala iifayile ezahlukeneyo ze-anchor nganye. Ngaphezulu, iifayile zakho ze-anchor akufanele zijonge ngokungathi zifana negama lakho legama okanye igama elingundoqo. Gcina ukhumbule ukuba iimibhalo ezifanayo ze-anchor ziya kuphazamisa udumo lwakho kwaye zenze izigwebo zeGoogle.
Ngaphambi kokuhlaziywa kweGoogle enkulu ngo-2012, bonke abaphathi bewebhu bavakalisa ngokugqithiseleyo kwinani leenjini ezingenayo kunokuba. Nangona kunjalo, emva kokuhlaziywa kweGoogle Penguin, zonke izicwangciso zokuqhagamshelanisa izalathisi ze-SEO zakudala azizange zisebenze.
Ngoko-ke, makhe sixoxe ngendlela yokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yakho ngendlela yendalo:
Unokufumana izixhumanisi zokuhlela ngokuqhagamshelana nje kunye neendawo eziphezulu ze-PR kunye nokuxoxa nabo ngamathuba akho yokwakha ikhonkco. Nangona kunjalo, kufuneka ulungele ukuba ufikelele kubanini bezabelo ezininzi zewebhu kwaye ngenxa yoko ungayithobeli okanye ufumane impendulo engalunganga. Ungahlola igunya leziza ezinxulumene ne-Semalt Web Analyzer okanye i-Majestic Source .